दशैँ, रामायण र किराँत
धर्म अफिम हो भनेर कार्लमाक्र्सले त्यसै भनेका होइन रहेछन् । धर्म भ्रम हो भन्ने सच्चाइप्रति म विश्वस्त छु । कुनै धर्म, देवदेवी या कुनै अमूर्त भगवानले संसार सृष्टि गरेका होइनन् । सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु, संहारकर्ता महादेव भनी पुजिने भगवानलाई मानिसले नै जन्माएका हुन् । तर मेरो कुरो पत्याउने बारेमा मैले आशा नगरे पनि हुन्छ । कतिपयले मैले बोल्न नपाउँदै त्यसको चर्को खण्डन गरिहाल्छन् । चुप लागौं भ्रमको जित हुन्छ, लेखौं भयङ्कर बबाल मच्चिन्छ । तर मैले लेख्नै पर्छ । कस्तै पनि भ्रमको चिरफार गर्न मैले लेख्नै पर्छ ।
दशैँलाई बाहुन क्षेत्रीको चाड भनिन्छ नेपालमा । जनजातिका नाममा यसलाई बहिष्कार गर्ने अभियान नै चल्यो एकचोटी । गोरेबहादुर खपाङ्गी ‘सर’ हुनुहुन्थ्योे त्यसको नायक । यो २०४८ पछिको कुरा हो । एकाध वर्ष पूर्वमा राई लिम्बुबाट ‘दशैँ बहिष्कारको’ आन्दोलन समेत चलाइयो । तर झुठो कुरो कति दिन टिक्थ्यो र ! गोरेबहादुरले राजाबाट बक्स भएको टीका ग्रहण गरेपछि उहाँ पनि सकिनु भयो, दशैँ बहिष्कार पनि सकियो । प्रायः चर्को उन्मादले यस्तै उल्टो परिणाम दिन्छ ।
आमनेपालीमा अर्को एउटा ठूलो भ्रम छ । त्यो के भने दशैँ राम– रावण युद्धको उपज हो । तर राम रावण युद्ध दक्षिण एशियामा भएकै थिएन । त्यो अफ्रिकाको शिरमा मिश्र र लिबियातिर भएको थियो । मैले यसको स्रोत पनि पटक पटक लेखिसकेको छु । नेपालका भौतिकवादी पुराणवाचक बालकृष्ण पोखरेलको ‘खस जातिको इतिहास’ र दक्षिण भारतका तमिल विद्वान मुक्कामला नागभूषणम्को ‘शतावतार’ पढेर मैले यो ज्ञान प्राप्त गरेको हुँ । रामायणको बारेमा जान्ने हो भने ‘शतावतार’ त नपढी हुँदै हँुदैन । त्यो किताबलाई सजिलो भाषामा भन्दा ‘रामायणका सय अवतार’ भन्ने अर्थ लाग्छ । रामायणको बारेमा कति अध्ययन गरेका रहेछन् ती विद्वानले ! अर्को भ्रम पनि छ नेपालीजनमा, आज जुन रामायण पढिन्छ त्यो नै महर्षि वाल्मिकिले लेखेका हुन् । वास्तविकता के हो भने, वाल्मीकिले छ हजार श्लोकको रामायण लेखेका थिए । अरु ऐरेगैरेले मनपरि थपथाप गरेर रामायणलाई चौबीस हजार श्लोकमा पु¥याइदिए । कुन श्लोक वाल्मीकिको मौलिक हो अनि थपिएका अठार हजार श्लोकका सिर्जनकर्ता को को हुन् भन्ने पनि कसैलाई थाहा छैन । यति मात्र होइन, बाहिरको त कुरै छोडौँ, भारतभित्रकै मराठी, तमिल र बंगाली रामायणमा पनि धेरै पाठ्य भेद छन् । अर्थात् ती एकअर्काबाट पृथक् छन् ।
मुक्कामला नागभूषणम्का अनुसार, वाल्मिकी रामायणले दक्षिण भारतको जस्ता चर्चा गरेको त्यो दक्षिण भारतमा कहिल्यै थिएन । वाल्मीकि रामायणको परिवेश जबलपुरभन्दा दक्षिण जाँदै जाँदैन । यसको अर्थ के हो भने या त रामायण सम्पूर्णतामा काल्पनिक हो या वाल्मिकि रामायणको परिवेश हालको नेपालभित्रै छ ।
तपार्इंहरूमध्ये कतिलाई थाहा छ कुन्नि, एउटा अयोध्या नेपालभित्रै छ । नारायणी नदी किनारबाट तीस चालीस किलोमिटर पूर्व अयोध्यापुरी नाम गरेको ठाउँ अहिले पनि भेटिन्छ । फटाफट हिँड्दा तीन चार घण्टामा पुगिन्छ भन्छन् चितवनका युवा । अब रामायण स्वयंले वर्णन गरेको एउटा विषयतिर हामी जाउँ । गर्भवती सीतालाई रथमा राखेर लक्ष्मण अयोध्याबाट बिहान जंगलतिर लागे र वाल्मीकि आश्रममा सीतालाई महर्षि वाल्मीकिको जिम्मा लगाएर फर्किए ।
व्यावहारिक रूपमा हिसाब गरौं– भारतको अयोध्याबाट एउटा रथ नेपालको चुरेभित्रको वाल्मिकि आश्रममा आएर सीतालाई त्यहाँ छोडेर सोही दिन घर फर्किने कुरो कल्पना मात्र हुन्छ । आजभोलिका बस र ट्रक अथवा कारहरू समेत बिहान अयोध्याबाट गुडेर बेलुका अयोध्या पुग्न सक्दैनन् भने त्यो जमानामा एकै दिन एउटा रथ अयोध्या–वाल्मिकि–अयोध्या गर्न सक्यो भन्ने आधार कहाँ छ ? तर माडीको अयोध्या पुगेर सोही दिन अयोध्या फर्किने कुरो तर्कसङ्गत हुन्छ ।
रामायण कालमा नेपालको भावरमा विद्याको ठूलो विकास भएको थियो भन्ने धेरै ज्ञानीहरूलाई थाहा छ । सांख्य दर्शनका प्रथम पुरुष कपिलमुनिको आश्रम कपिलवस्तु, नारायणी नदीको किनारमा अवस्थित वाल्मीकि आश्रम, जहाँ छ हजार श्लोकको रामायण लेखियो । जनकपुरको कुरै नगरे हुन्छ । जनकपुरबाट पूर्व लागेपछि विश्वामित्रको आश्रम कोशी नदीको किनार । सुनसरी जिल्लामा पर्ने रामधुनीको जंगलमा नै राम, लक्ष्मण र सीताको बाह्रवर्षे वनबास भएको सम्भावना बढी छ । किनभने रामायणमा वर्णित पञ्चवटी त अहिले कतै छैन । त्यति मात्र होइन, विश्वामित्र रामलाई लिन भारतको अयोध्या जानुभन्दा नेपालकै अयोध्यापुरी जानु बढी सान्दर्भिक देखिन्छ ।
भारतको अयोध्यामा राम थिएनन् भन्ने मेरो निष्कर्ष होइन, त्यहाँ कुनै कालखण्डमा राजा राम थिए होलान्, तर ती हाम्री सीतामाताका पति चाहिँ किमार्थ थिएनन् । उसै पनि राम त थाइल्याण्ड र मिश्रमा पनि छन् । आफ्नो देश बाहिरका रामहरूको बारेमा चर्चा गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । तर भारतीय अयोध्याका रामलाई सीतापति बनाउने काम वाल्मिकि होइन, पछि उपकथा थप्ने कुनै अठार हजारे भारतीय पण्डितको हुनसक्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । किनभने अयोध्या त थाइल्याण्डमा पनि छ । अहिले पनि त्यस्तै अठार हजार श्लोके भारतीय पण्डितहरू गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएका थिए भन्ने हुइँया मच्चाइरहेका छन् ।
अब जाउँ दशैँतिर । दशैँ नेपालसँग जोडिएको पर्व हो, यसमा रामायणको मिसमास पटक्कै छैन । यो भनाइको पुष्टि गर्न हामीले नेपाल र भारतमा मनाइने दशैँको तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली दशैँ भनेको मारकाटको आधिक्य भएको चाड हो । दशैँको सप्तमीमा मौलोमा बाँधेर जनावरको बलि दिने चलन मैले जान्दासम्म थियो । सप्तमी, अष्टमी र नवमी मासु पर्व हुन् । दशमीको दिन टीकाको दिन हो । नेपालभित्रै पनि कतिपय जिल्लामा दशमीको टीका लगाएपछि दशैँ सक्किने चलन छ । कतिपय स्थानमा दशमीपछिको पाँच दिनसम्म टीका लगाउने चलन छ । कति दिन टीका लगाउने भन्नेमा विवाद भए पनि सप्तमी, अष्टमी र नवमीमा मासुको चाड बनाउने कुरामा कतै कसैको विवाद भएको पाइँदैन ।
तर भारतमा मासुको प्रयोग दशैँभरि गरिंदैन । दशहरा भने पनि त्यता पूmलपाती मात्रै प्रयोग हुन्छ ।
यथार्थमा दशैँ किराँतहरूको चाड हो । मेची अञ्चलमा काम गर्दा एउटा अनौठो भनाइ सुनेको थिएँ मैले । ‘गहभरि आँसु, दुनाभरि मासु । ’ अर्थात्, मृत्युको शुद्धिमा पनि जनजातिलाई मासु नै चाहिन्छ ।
भन्न त नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई रोटीबेटीको सम्बन्ध भन्न मन पराउँछन् कतिले । तर रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको मुलुकसँग हाम्रा अधिकांश महìवपूर्ण चाडबाड मिल्दैनन् । दशैँको बारेमा मैले माथि नै भनिसकें । उनीहरू यमपञ्चक (तिहार) मनाउँदैनन् । उनीहरूको राखीको चाड भाइबैनाको सबैभन्दा महìवपूर्ण चाड हो । यता हामी त्यो दिनमा ब्राह्मणहरूबाट डोरो बाँध्छौँ ।
म आफ्ना पाठक सामु अनुरोध गर्न चाहन्छु – कसैको कुरो पनि बिना तर्क नखानुस् । अरु कसैले तपाईंलाई सत्य सिकाउँदैन । हाम्रो देशका पहिला बासिन्दा किराँती नै हुन् । तिनले पालन गर्ने नियमहरू लामो समयसम्म नेपालमा नीति र संस्कारको रूपमा बाँचिरहे । पछि आउने सबैले यसलाई निरन्तरता दिए । दशैँ भारतबाट आएको होइन । त्यो हाम्रै हो । तिहार पनि भारतको दिपावली होइन, हाम्रै भाइबैनाको भावनात्मक सम्बन्धको चाड हो ।
यति भनिसकेपछि राम हाम्रा देवता होइनन् भन्ने बारेमा पनि प्रस्ट हुनुपर्छ । किनभने विश्वमा तीन रामहरू देखा परिसके । मिश्रका राम, थाइल्याण्डका राम र वाल्मिकिका राम ।